डा. बालकृष्ण शाहसँग वार्ता : पाठेघरको सिस्ट कति जोखिमपूर्ण हुन्छ ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeजीवनशैलीडा. बालकृष्ण शाहसँग वार्ता : पाठेघरको सिस्ट कति जोखिमपूर्ण हुन्छ ?
महिलाहरुमा देखिने पाठेघरको सिस्ट धेरैमा देखिने साझा समस्या हो । कतिपयमा यो सामान्य रुपमा देखिन्छ भने कतिपयमा यो जटिल रुपमा समेत देखिन्छ । तर चिकित्सकहरु पाठेघरको सिस्टको समस्यालाई लिएर धेरै भयभीत हुनुनपर्ने बताउँछन् । यही पाठेघरको सिस्ट, सेतो पानी बग्ने समस्या र अनियमित महिनावारीको विषयमा प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण साहसँग गरिएको कुराकानी :
पाठेघरमा देखिने सिस्ट के हो ?
अण्डाशयमा पलाउने फोका (सिस्ट) लाई नै पाठेघरको सिस्ट भन्ने गरिन्छ । पाठेघरमा हुने तीन तहमध्ये सबैभन्दा भित्री तहमा हुने इन्डोमेट्रोसिस महिनावारीको समयमा झर्छ । जसबाट रगत निस्कन्छ । यो इन्डोमेट्रोसिस झर्ने क्रममा अण्डाशयमा समेत रगत बग्छ र त्यही रगतवाहिनी क्षेत्रमा फोका पलाउँछ त्यसैलाई चिकित्साको भाषामा सिस्ट भनिन्छ ।
यो त्यस्तो ठूलो कुरा पनि होइन । सामान्यतया अण्ड उत्पादनको क्रममा कुनै बेला सिस्ट हुन सक्छ । यो बेलामा आत्तिनुपर्ने कारण छैन । धेरै जसो त मान्छेमा साना सिस्टहरु पलाउँछ, जुन आफैँ फुटेर जान्छन् । बढीमा ६० एमएम भन्दा कम आकारका सिस्टहरु आफैँ हराएर जाने गर्छन् । त्योभन्दा ठूला सिस्टहरु भने संकलन भएर बसेका हुन्छन् । जसले गर्दा अरु रोग देखिन थाल्छ । यदि सिस्ट भएको थाहा भएमा सानो भए पनि ठूलो भए पनि फलोअप भने गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ सिस्टले सम्भावित पाठेघरको क्यान्सरको हुन लागेको सूचना पनि दिने गर्छ । ठूलो सिस्ट भएको खण्डमा भने शल्यक्रिया गर्नुको विकल्प छैन ।
पछिल्लो समय पाठेघरको सिस्टको समस्या बढ्दो छ भनिन्छ, यसको कारण के होला ?
पाठेघरको सिस्टको समस्या बढ्नुको पछि विभिन्न कारणहरु हुन्छन् । कहिलेकाहीँ अण्डाशयमा हुने खराबीका कारण पनि यस्तो समस्या हुन्छ भने कहिलेकाहीँ वंशाणुगत कारणले पनि समस्या सिर्जना हुन्छ । कुनैकुनै बेला कुनै प्रष्ट कारण नभए पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले समयसमयमा यसको उपचार गरिरहनुपर्छ ।
अर्काेतर्फ केही अध्ययनले बच्चा कम पाउने महिलाहरुमा पनि सिस्टको समस्या बढी हुने गरेको देखाएको छ । यो पूरा प्रमाणित तथ्य नभए पनि यसमा पनि केही बहस भने गर्न सकिन्छ । कुनै पनि महिलामा गर्भ बसेपछि १५ महिनासम्म पाठेघरमा अण्डा उत्पादन हुँदैन । अर्थात् यो अण्डा उत्पादन गर्न नपर्ने भएकोले आरामको समय हो । अण्डा उत्पादन नहुँदा सिस्टको सम्भावना पनि रहँदैन । तर थोरै बच्चा जन्माउने आमामा धेरै बच्चा जन्माउनेको तुलनामा धेरै अण्डा उत्पादन हुने र अण्डाशयले आराम नपाउने भएकोले पनि यस्तो समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता कतिपयको छ ।
सिस्टको प्रकृतिअनुसार यसको उपचार विधि तय गरिन्छ । यदि सिस्ट सानो खालको छ भने यसलाई कुनै उपचारको जरुरी हुँदैन । यो आफैँ फुटेर जान्छ । तर सिस्ट सानै छ भने पनि यसले कुनै साइड इफेक्ट गरेको छ कि भनेर समय समयमा परीक्षण गरिरहनुपर्छ । सानै सिस्टलाई पनि ३ देखि ६ महिनासम्ममा फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ठूला सिस्टको उपचार भनेको शल्यक्रियाबाट नै हुन्छ । यसको लागि विभिन्न प्रविधिहरु हुन्छन् । जुनसुकै विधिबाट भए पनि शल्यक्रिया गरेर ठूलो सिस्ट हटाउन सकिन्छ ।
कुन अवस्थामा यो खतरनाक हुन सक्छ ?
सानो सिस्ट धेरै खतरनाक हुँदैन । यद्यपि सिस्ट धेरै ठूलो भयो भने यसले अण्डाशयमा धेरै अवरोध वा इन्फेक्सन हुन सक्छ । जसका कारण ठूला सिस्ट भएको थाहा पाउने बित्तिकै यसलाई शल्यक्रिया गरेर निकाल्नुपर्छ ।
सेतो पानी बग्ने समस्या किन हुन्छ ?
योनीमा सेतो पानी बग्ने समस्या पनि त्यस्तो जटिल समस्या होइन । योनीमार्गलाई सुख्खा हुन नदिन समयसमयमा थोरै पानी बगिरहेको हुन्छ । तर यही प्रक्रियामा पनि धेरै पानी जाने, योनी गह्नाउने जस्ता समस्याहरु थपियो, पानी बाक्लो हुने जस्ता समस्या देखियो भने चाहिँ यो समस्या समाधानको उपाय खोज्नै पर्छ । यो पनि कतिपय इन्फेक्सनको कारणले पनि हुन सक्छ । कुनैपनि इन्फेक्सनको समयमा उपचार भएन भने यसले निःसन्तान हुने जस्ता जोखिम समेत बढ्छ ।
पिसाब संक्रमणको कारण के हो ?
पिसाबको संक्रमण पनि जीवाणुहरुको कारण हुन्छ । योनीमार्गमा रहेका जीवाणुहरु पिसाब थैलीमा गयो भने पिसाबमा संक्रमण हुने गर्छ । पिसाब संक्रमण यौनअंगको समयमा सरसफाइ नगर्दा वा शरीरको कुनै भागमा भएको संक्रमण रगतको नली हुँदै पिसाब नलीमा पुग्यो भने यस्तो समस्या हुने गर्छ ।
मासिक स्राव गडबडी वा अनियमित हुनुको कारण के होला ?
मासिक स्रावमा हुने गडबडी कुनै हर्माेनको सन्तुलनको अभावमा हुने गर्छ । कतिपयमा इन्फेक्सनको कारणले पनि मासिक स्रावमा समस्या निम्तिन सक्छ । इन्युनिटि कन्सन्ट्रेसन, विभिन्न किसिमका दीर्घरोग आदिका कारण पनि समस्या सिर्जना हुन्छ ।
मासिक स्राव रोकिएको अवस्था छ भने यसमा सबैभन्दा पहिले समस्याको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । सबै समस्याको कारण देखिने खालको मात्रै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हर्माेनको मात्रालाई ध्यान दिएर पनि मासिक स्राव नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।
Previous articleपाँच लाख व्यवसाय अनुगमनको जिम्मा १२ कर्मचारीलाई
Next articleहराएको डिभाइसबाट कसरी हटाउने जिमेल एकाउन्ट ?